Goobaabin Nasso: Khiyaamada Halxiraalaha Fanka Maalinlaha ah&Hack – Talooyin Cheats Android
Waxaa qoray Editor | Nofeembar 28, 2021
Halxiraalaha wareegga nasashada ee Circle Relax wuxuu keenaa halxiraalaha slide-ga caadiga ah oo fudud oo qabatimo. Taabo ama simbiriirixa tiles si aad u xalliso halxiraalaha. Ku ciyaar adiga oo isticmaalaya sawirka jasiiradda kulaalayaasha ee quruxda badan ee la dhisay, ama samee xujooyin aan xadidnayn. Sida ugu dhakhsaha badan ee aad u dhamaystiri karto ciyaarta?
Sifooyinka nasashada Circle:
• Saacadaha ciyaarta oo dhaqaajiya xisaabaadka xisaabaadka si loo cabbiro horumarka xirfadda.
• Sawirka halxiraalaha bilaashka ah ayaa la cusbooneysiiyaa maalin kasta!
• In ka badan 1000 xujooyin qeexid sare oo qurux badan!
• Xirmooyinka halxiraalaha cusub oo leh shuqullo gaar ah oo ay sameeyeen rinjiyaal!
• Hakinta ciyaarta dhexdeeda.
• Heerar dhib badan.
Ku shaqee in ka badan hal halxiraale markiiba oo arag horumarkaaga!
• Dib u eeg sawirka farshaxan ee dhammaatay si uu kaaga caawiyo xallintiisa!
• Tiirarka si habsami leh oo degdeg ah ayaa meesha ugu simbiran.
Habka wareegga ee faa'iidooyinka halxiraalaha jigsaw dhabta ah! U dhaqaaq qaybo koox koox ah!
• Ururinta muusikadda oo aad u wanaagsan: dooro muusik sax ah oo ku haboon niyadaada!
• Koontaroolada fudud ayaa fududeeya xallinta xujooyinka jigsawga!
Oo waxaa jira astaamo badan oo lagu ogaanayo! Waxaad si fudud u abuuri kartaa halxiraale shaqsiyeysan oo gaar ah! Intaa waxaa dheer waxaad ka dooran kartaa laxanka aad jeceshahay sida ugu wanaagsan ururinta muusikayada ciyaarta dhexdeeda si aad u raacdo nasashadaada, fadhiyada sawir-qaadista ee stress-ka!
Goobta nasashada waxaad u safri kartaa aduunka oo dhan, eeg muuqaallo qurxoon, la kulma xilliyada sanadka iyo mucjisooyinka adduunka, Dhammaan waxaad ka timid nabadda iyo xasilloonida gurigaaga.
Waxa aanu kuu samaynay app-kan si aanu suurtogal ugu dhigno inaad ciyaarto ciyaarta aad jeceshahay meel kasta iyo wakhti kasta. Waxay si buuxda u ekaysiinaysaa halxiraalaha jigsaw-ga xorta ah ee dhabta ah iyo, isla markaasna, Appku wuxuu isticmaalaa dhammaan faa'iidooyinka uu leeyahay si uu u ciyaaro ciyaarta aad jeceshahay ka dhigto mid ku habboon sidii ay weligeed suurtagal ahayd.
Qeybta: Khiyaamo iyo Hack ama Talooyin Calaamadaha: Art, CheatsHack, Circle, Daily, Halxiraale, Nasasho
← Poppy Playtime Huggy Wuggy – Khiyaamo&Hack Mas Miskiin: Ma ku caawin kartaa khiyaamo&Hack →
Wordle – Khiyaamo&Hack
Merge Animals – Khiyaamo&Hack
Happy Clinic – Khiyaamo&Hack
Veggie Onet – Khiyaamo&Hack
Merged Cyborg – Khiyaamo&Hack
Poppy Survival Game – Khiyaamo&Hack
Stack Smash – Khiyaamo&Hack
Dismount Simulator – Khiyaamo&Hack